ओली सरकारमा दोहोरो मापदण्ड : पूर्वएमाले समर्थकले धमाधम नियुक्ति पाउने, पूर्वमाओवादीको नामै सुन्न नचाहने Canada Nepal
ओली सरकारमा दोहोरो मापदण्ड : पूर्वएमाले समर्थकले धमाधम नियुक्ति पाउने, पूर्वमाओवादीको नामै सुन्न नचाहने
राजेन्द्र बस्याल आश्विन १ २०७७
काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा गठन भएको थियो । त्यस आधारमा सरकारमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको बराबरी हक लाग्नुपर्ने हो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पूर्वमाओवादी पक्षले ढिम्किनै पाएका छैनन् ।
पूर्वएमाले खेमाका नेता तथा कार्यकर्ताले धमाधम नियुक्ति पाउँदा माओवादी खेमा भने हेरेर बस्न बाध्य छ । किनभने सशक्त विरोध गर्ने हैसियत सो खेमाले राख्न पाउँदैन ।
पूर्वमाओवादी खेमाले पाएको मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्तक्षेप गरेका छन् । चाहे गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय वा आपूर्ति मन्त्रालय नै किन नहोस् । ती मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा पूर्वएमाले कार्यकर्ताकै हालीमुहाली छ ।
नेकपामा कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका व्यक्तिले नियुक्ति पाउँदैनन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारका भाइले सिधै चार वर्षे नियुक्ति पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका भाइ चन्द्र थापालाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारिणी समिति सदस्यमा नियुक्ति गरिएको छ ।
तर, प्रचण्डले भनेका व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न प्रतिस्पर्धाका आधारमा आउनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिने उनै सूर्य थापा हुन् । यस्तो प्रवृत्तिले पनि नेकपामा विवाद आउने गरेको छ ।
थापासँगै बेलायती गैरसरकारी संस्था अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएमं) नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. सुरेश तिवारीलाई सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्षमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । सबैजना पूर्वएमाले कार्यकर्ता हुन् ।
आश्विन १, २०७७ बिहिवार १२:५३:२० बजे : प्रकाशित
सर्वाेच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । थप जिम्मेवारी भन्नाले मन्त्री बन्नलाई इंगित गरिएको हो ।